31 Jan 2021 မနက်ခင်းကိုသာ ပြန်သွားခွင့်ရမယ်ဆိုရင် | ရိုးမြေကျ
ကိုယ်ဘယ်တုန်းကမှ ရင်ခုန်သံကို ခုတုံးလုပ်ပြီး စာရေးဖို့အတွက် ကုန်ကြမ်းမရှာဘူး။
အား​ကောင်း​မောင်းသန်လူငယ်​တွေ ဦး​ဆောင်ပြီး CBM ဥက္ကဌကိုယ်စားလို့ သူ့ကိုယ်သူ သတ်မှတ်သူကြီး ဦးဝင်း​သော်နဲ့ ဗဟိုဘဏ်က စာတတ်​ပေတတ်လူနည်းနည်းပါးပါးကို ပြန်​ပေးဆွဲမယ်။ အစိုးရရုံးဌာန​တော်​​တော်များများကို CDM လုပ်ဖို့ မတိုက်တွန်းဘူး။ မဟစ်​ကြွေးဘူး။ ပညာ​ရေးဌာနနဲ့ ကျန်းမာ​ရေးဌာနကို တအုပ်စုလုံး CDM ဝင်ဖို့ ဆွဲ​ဆောင်မယ်။ အခွန်ရုံးနဲ့ စည်ပင် က တကယ်အားကိုးရတဲ့ Key Person ​တွေကို ပြန်​ပေးဆွဲထားနှင့်မယ်။ Operations တခု ရပ်သွား​စေချင်ရင် လူအားလုံးမရှိမှ ရပ်တာမဟုတ်ဘူး။ Key Person, Core Person မရှိတာနဲ့ Operations တခုလုံး ကျွမ်းထိုး​မှောက်ခုံဖြစ်တယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းအားလုံး CDM ဝင်ဖို့ ​ကြောင်​တောင်​တောင် တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အခါ CDM သမား​တွေကို ​ထောက်ပံ့ခဲ့ရတဲ့ ​ငွေ​တွေဆိုတာ နှ​မြောစရာ။ CRPH အလှူခံတဲ့အချိန် တပြားမှ မထည့်ဖို့ တိုက်တွန်းမယ်။ အလှူခံရတဲ့ ​ဒေါ်လာ ဆယ်သန်း​ကျော်ဟာ ဘယ်နားပလုံသွားမှန်းမသိဘူး။ ပိုက်ဆံရိုက်ထုတ်​ပေး​နေတာ ကျ​နော်တို့ အ​မေလင်မဟုတ်ဘူး။ စိတ်အပင်ပန်းခံပြီး ​ငွေရှာ​​နေကြရတာ။ ဘယ်သူမှ ​​ပျော်မ​နေဘူးရယ်။ Core Person ​တွေပဲ CDM လုပ်တဲ့အခါ CDM ​တွေကို ​ထောက်ပံ့ရတဲ့ ဘတ်ဂျက်ပိုထွက်လာမယ်။ ဝန်ထမ်းအားလုံး CDM လုပ်လို့ အလုပ်မရှိ အကိုင်မရှိနဲ့ စိတ်ကျ​ရောဂါဝင်စရာ မလို​တော့ဘူး။ လက်ရှိအလုပ်ကိုပဲ ဆက်လုပ်ပြီး SAC ​ပေးမယ့် လစာယူပြီး အဲဒီလစာနဲ့ နာနတ်သီးဖိုးလှူ။ ဘာလို့ဒီလို​ပြောရတာလဲဆိုရင် အခွန်ရုံးက ဝန်ထမ်း​တွေဆိုတာ လူတိုင်းအားကျိုးမာန်တက်အလုပ်လုပ်​နေကြတာ မဟုတ်ဖူး။ အ​မေစုလက်ထက်ကတည်းက အလုပ်ချိန်မှာ ဂိမ်း​ဆော့လိုက် စကား​ပြောလိုက်နဲ့ တိုင်းပြည်ရဲ့ အခွန်​ငွေ​တွေ အလဟဿဖြစ်​နေခဲ့တာ။ သူတို့ ဂျ​လေဘီလုပ်​နေလို့ လုပ်အားဆုံးရှုံး​​နေခဲ့ရတာ။ အ​မေစုလက်ထက်မှာ​တောင် စလုံးကို ​ကျော်ရမယ် ​ပြော​တော့ ဒီလို အစိုးရဝန်ထမ်း​တွေနဲ့ စလုံးကို ​ကျော်ဖို့ ​မြေပုံချပြီး ကုလားမ​ခြေ​ထောက်နဲ့ ​ကျော်ရင်​တော့ အသာ​လေး စင်ကာပူကို ​ကျော်လို့ရတယ်။ ဒီ​တော့ သိပ်ကြိုးကြိုးစားစားမရှိတဲ့ ဝန်ထမ်း​တွေ CDM လုပ်ဖို့ မလိုဘူး။ ဒီအတိုင်း ရုံးတက်, ဂိမ်း​ဆော့, မနက် ၁၀နာရီမှ ရုံးလာ, လကုန်ရင် SAC ​ပေးတဲ့ လစာယူ။ ​သွေးစွန်းတာ​တွေ ဘာ​တွေ​တွေးမ​နေနဲ့။ ဘုန်းကြီး​တွေ​တောင် ​သွေးစွန်းဆွမ်းဘုန်း​နေကြရရှာတာ။
KBZ, AYA, CB, MAB, UAB ဘဏ်ထဲက​နေ ပင်စင်စားအဖိုးကြီး အဖွားကြီး​တွေကို ပိုက်ဆံကြိုထုတ်ခိုင်းထားမယ်။ % နဲ့ လဲသုံးရရင် ရှိတာ​လေး အ​ငွေ့ပြန်သွားမှာစိုးလို့။ ပန်ဆယ်လိုမ ​လော်လို့ ပြည်သူ​တွေ ​ငွေဒုက္ခ​ရောက်ကြ​တော့မှာ​လေ။ ပြီး​တော့ KBZ, AYA, CB, MAB, UAB စတဲ့ ဘဏ်​တွေက CFO ​တွေ FC ​တွေကို ပြန်​ပေးဆွဲမယ်။ ​ဘဏ်ပိုင်ရှင်​ရော ​အောက်​ခြေဝန်ထမ်း​တွေကို​ရော Financial Consultant မရှိဘဲ ​ယောက်ယက်ခက်ကြပ​လေ့​စေ။ ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်ဝန်ထမ်း​တွေကို ​ယောင်လို့​တောင် CDM မဝင်ခိုင်းနဲ့။ ဘဏ်က သူ့အလိုလိုပြိုမှာ။ ကိုယ်က လက်​​ညောင်းခံ သွားတွန်းမ​နေနဲ့။ အချိန်ကုန်တယ်။
ပြီး​တော့ CDM ​တွေကို ​ထောက်ပံ့ရမယ့် ပိုထွက်လာတဲ့ ဘတ်ဂျက်က​နေ မင်းဂွတ်သီး, နာနတ်သီး ဝယ်ထား။ တ​ပေါင်းမ​ကျော်ခင် ​​ဒေါင်း​ပျော်ရမယ်လို့ ​ကြောင်စီ​ကွေးမ​တွေးနဲ့။ ပြီး​တော့ ဒလန်​တွေကို နားကန်း​ မျက်စိကန်းအောင် အရင်လုပ်ထား။ ရက်စက်​ပေမယ့် မတတ်နိုင်ဘူး။ နားရှိ မျက်စိရှိလို့သာ သူတို့ သတင်း​ပေးလုပ်လို့ရတာ။ သတ်စရာမလို​တော့ မျက်စိမမြင် နားမကြားတဲ့ဘဝ​ပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံရလာမယ့် ဒီမိုက​ရေစီကို ​ပေးခံစားခိုင်းလိုက်ပါ။
လူတိုင်းအလုပ်လုပ်။ အစိုးရဝန်ထမ်း​ရော ပုဂ္ဂလိက ဝန်ထမ်းရော ရှာလို့ရတဲ့ ဝင်​ငွေကို ၁ရာခိုင်နှုန်း​လောက်ပဲ ပြန်လှူကြအုန်း။ နည်းတဲ့​ငွေလား။ တလရဟာ မြန်မြန်​တောင် ပွဲပြတ်သွားနိုင်တယ်။ ​သွေးစွန်းတယ်လို့ ​မ​တွေးနဲ့။ ဘိုင်ဒင်စားတဲ့ ထမင်း, ရှီကျင့်ဖျင် စားတဲ့ထမင်း, ယုတ်စွအဆုံး သီတဂူနဲ့ သဘာဝတရားရိပ်သာ​ ဘုန်း​ပေးတဲ့ ဆွမ်းလဲ ​သွေးစွန်းပြီးသား။
ပြီး​တော့ မြသွဲ့သွဲ့ခိုင်ကို အနီ​ရောင်အဝတ်အစားမဝတ်ခိုင်းဘူး။ ခန့်ငြားဟိန်းကို အခန်းတံခါး​သော့ခတ်ထားမယ်။ ညီညီထက်နိုင်ကို လှည်းတန်း​ကျောင်း​ရှေ့က​နေ ဖယ်ခိုင်းထားမယ်။ Bulletproof Helmet ​တွေ ​ဆောင်းခိုင်းထားမယ် လူငယ်​တွေကို။
စိုင်းစိုင်းကိုလဲ Boycott, SP မလုပ်ခိုင်းဘူး။ သူ့ဝင်​ငွေနဲ့ အလှူခံရရင် တလရအတွက် တတပ်တအားပဲ။ ကျ​နော်တို့​တွေဟာ လိပ်ကို သစ်ပင်​ပေါ်တက်ခိုင်းတယ်။ ​မျောက်ကို ​ရေဆင်းကူးခိုင်းတယ်။ ငါးကို ကုန်း​ပေါ် အသက်မရှူနိုင်ရ ​ကောင်းလား ပြစ်တင်ကဲ့ရဲ့ကြမယ်။ အမှား​တွေ။ ကျ​နော်တို့ မစဥ်းစား မ​တွေး​ခေါ်ဘဲ လုပ်မိတဲ့အမှား​တွေ။ ဒီအမှား​တွေသာ ပြင်လို့ရမယ်ဆိုရင် တလရဟာ .............. ??????
ကျ​နော်က Finance သမားတ​ယောက်ပါ။ ​ဆရာဝန်တ​ယောက်လို​တော့ မရဲရင့်​ပေမယ့် ကိန်းဂဏန်း​တွေအ​ပေါ်မှာ အတွက်အချက်ပီပြင်စွာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျ​နော့် ဝင်​ငွေ​လေးနည်းနည်းဟာ ​သွေးနည်းနည်း​တော့ စွန်းခဲ့ပါတယ်။ မတတ်သာတဲ့အဆုံး ​ရွေးစရာမရှိတဲ့ ဘဝဆိုတာ ခင်ဗျားတို့ ကြုံလာရမှာပါ။ ဂျီ​ဟောသူကြီး မစန္ဒာကို သိပ်မ​လှောင်ကြပါနဲ့ဗျာ။ ခင်ဗျားတို့ ကိုယ်တိုင် လမ်းမ​တွေ​ပေါ်မှာ ရုံးမတက်နဲ့ ရုံးထွက် ရုံးထွက် ဆိုပြီး အာ​ဘောင်အာရင်းသန်သန် ​ရေရွတ်ခဲ့ဖူးမယ်။ ရုံးတက်​နေတာ ရှက်စရာလို့ လမ်းမထက်မှာ ဟစ်​ကျွေးခဲ့ဖူးမယ်။ ကျ​နော်တို့ရဲ့ ကျယ်​လောင်တဲ့ အသံ​တွေ​ကြောင့် အစိုးရဝန်ထမ်း​အနည်းစုဟာ CDM ရဲ့ အတိမ်အနက်ကို မသိဘဲ Peer Pressure ​ကြောင့် CDM လုပ်ခဲ့ကြတာ​တွေ ရှိမယ်။ ရင်ထဲအသဲထဲက SAC ကို မ​ထောက်ခံလို့ထက်။ ကျ​နော်တို့က ပိတ်ထားတဲ့ နား​တွေ ကြား​အောင် ​အော်ခဲ့ကြတာ။ သူတို့အားလုံး Pressure ​ကြောင့် CDM လုပ်ဖြစ်သွားကြတယ်။ တကယ်တမ်း ​ထောက်ပံ့ဖို့လုပ်​တော့ ကျ​နော်တို့​တွေ ​ထောက်ပံ့နိုင်တာက ဆင်ပါးစပ်နှမ်းပက်သလိုပဲ။ UK နိုင်ငံ Brexit ဆိုပြီး EU က​နေ ထွက်ခဲ့သလိုပဲ။ ဖင်မနိုင်ဘဲ ပဲကြီးဟင်းစားဖို့ မလိုဘူး။ နိုင်ရုံ​လောက် ဝမ်းသွားနိုင်ရင် ​ပေါ့ပါးတယ်။ CDM, CDM ဆိုပြီး ​ရေရွတ်ခဲ့ကြတဲ့ ကျ​နော်တို့ ကိုယ်တိုင်က အလုပ်ကိုယ်စီနဲ့။ CDM သမား​တွေထက် ပိုအဆင်​ပြေလှတဲ့ ဘဝ​တွေ ပိုင်ထားတယ်။ လုံသလား လိပ်ပြာ။ ခင်ဗျား ရဲရဲကြီး လိပ်ပြာလုံသလား။
ဖဘ​ပေါ်မှာ ဆယ်လီ​တွေ ​ပြောသမျှ စဥ်းစား​တွေး​ခေါ်နိုင်ခြင်း မရှိဘဲ ​ယော​ရောင်​သော​ကောင် ​ယောင်​ခြောက်ဆယ် အဖွဲ့ကြီး။ ဘတ်ဂျက်သိဖို့ လိုတယ်ဗျ။ ခန့်မှန်းတတ်ဖို့ လိုတယ်။ အနိုင်အရှုံးဆိုတာ စဥ်းစား​တွေးခေါ်နိုင်မှု အား​ကောင်းတာနဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်။ လက်​​တွေ့ဆန်ဖို့လိုတယ်။ False Hope နဲ့ စိတ်ကူးမယဥ်ဖို့ လိုတယ်။ ဖဘ​ပေါ်က ဆယ်လီ​တွေဆိုတာ လူပြိန်းကြိုက် ​ဒေါ်နယ်ထရမ့် ပျက်လုံး​တွေလိုပဲ။ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်က​တော့ ဟုတ်လို့။ စိုင်းစိုင်းကို SP လုပ်ဆို လိုက်လုပ်လိုက်ကြ။ ဟိုလူ့​လှောင် ဒီလူ့​လှောင်နဲ့။
စကားမစပ် ကျ​နော့်အ​မေက​တောင် အ​မေစုပြန်လာရင် အရာအားလုံးအဆင်​ပြေသွားမှာတဲ့။ ရယ်ချင်တာ။ သိကြားမင်း​တောင် မအလကို တည့်တည့်မပစ်ရဲဘူး။ ​​နေပြည်​တော် သွားရမယ့် မိုးကြိုးများ ​ဝေ့ဝိုက်​နေတာ ဆိုတာ။ အ​မေစုက သိကြားမင်းမှ မဟုတ်တာ။ ပြီး​တော့ ​မေ​မေက ​ပြော​သေးတယ်။ အ​မေစုပြန်လာရင် ဘဏ်ကိစ္စ​တွေ အဆင်​ပြေသွားမှာတဲ့။ ​28 Feb 2022 ဆို ​ဘဏ်​တွေပြို​တော့မှာ။ ကျောင်းသားဘဝမှာ ကဗျာ​တွေ စာ​တွေ မ​ရေးရလို့ ခုမှ ဥက္ကဌကိုယ်စားဖြစ်သူကြီး ထိုင်ထုတ်​နေတဲ့စာ​တွေ စိပ်လာတဲ့ တ​နေ့
14.11.2021 (11:11 AM)
Posted by Yoemyaykya at 12:11 AM
Labels: Political Points
ဟိတ် အမယ်မယ် တိုးတိုးတိတ်တိတ်ပဲ စာဖတ်သွားဖို့မကြံနဲ့။ တခုခုတော့ ပြောခဲ့ပါဦး။
စာရေးတာကို အရမ်းရူးသွပ်ပေမယ့် စိတ်ခံစားချက်ပြင်းထန်လာမှသာ စာရေးလို့ရပါတယ်။ အားအကျဆုံးစာရေးဆရာက ဆရာမဂျူးပါ။
ချစ်ခြင်းမတူနိုင်သော်မှဖြင့် ပိုချစ်တဲ့သူ ကိုယ်ဖြစ်ပါရစေ (ဂျူး)
မယ့်ရဲ့ အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာ ကျနော်
၀တ္ထုတို Book Review Notes on my Facebook Political Points ကဗျာ ကိုယ်တိုင်ရေးဆောင်းပါး ခံစားမှုစာစု ချစ်သူဖတ်ဖို့ တဂ်ပို့စ် ဘလော့ဂ်အမှတ်တရ ဘဝစာမျက်နှာ ဘာသာပြန် မွေးနေ့အမှတ်တရ ရင်ဖွင့်စာ ရောက်တတ်ရာရာအပိုင်းအစများ သရော်စာ ဟာသ အတွေးစလေး အမှတ်တရ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
မမဝသုန် နှင့် အပြာရောင်တောင်တန်းများ
ရိုးအပုံက သူလိုငါလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး မေမေရေ……….. ကိုယ့်အကြောင်းလူမသိလေ လုံခြုံလေ ကိုယ့်အကြောင်းလူမသိလေ အန္တရာယ်ကင်းလေ ဒါတွေဟာ မေမေ့နိမ...
ဇန်နဝါရီ(၁၆)ရက်နေ့ ဘတ်စ်ကားလိုင်းအပြောင်းအလဲမှာ စာရေးသူနဲ့ ရုံးကညီမလေးတစ်ယောက်တို့ လက်တစ်ကမ်းကမ်းကြမယ်အဖွဲ့မှာ Volunteer လုပ်ခဲ့တယ်။ မထသ...
တကယ်ဆို မယ့်ရဲ့ အသင်နားမလည်နိုင်သော စာအုပ်ကတည်းက မယ့်အရေးအသားတွေကို အားပေးခဲ့တာ။ အရေးပေါ်အခန်းထဲမှာ စာအုပ်ကို ပထမအကြိမ်ထုတ်ကတည်းက အားပေးပြ...
ကုမ်ရာသီမှာ လင်းတဲ့လ လလေးက ရိုးတိုးရိုးတိတ်နဲ့ ဖေဖော်ဝါရီကို ချော့မြှူနေလေရဲ့ ဒီဆောင်းနှောင်းရာသီမှာ ကဗျာတွေလဲ ကြယ်စင်လို လင်းလိုလင်း ကာ...
မနက်က မောင် ဆုံးပြီဆိုသော သူမသူငယ်ချင်းပို့လိုက်သည့် အီးမေးလ်ကို ဖတ်လိုက်ရတော့ သူမ မျက်လုံးကို သူမ မယုံချင်သဖြင့် ထိုအီးမေးလ...
ကိုယ်လဲ မှောက်မယ် ချန်မထားနဲ့ (တဂ်ပို့စ်)
ခုတလော အလုပ်ထဲမှာ စိတ်ညစ်စရာလေးတွေတော်တော်များတာကလား။ ဒါပေမယ့် ညစ်နေတာတွေက (၂၈.၈.၂၀၁၃) တုန်းက မမမိုးငွေ့ ဘလ...
“အဲဒီတုန်းက ငါ့အဖြစ်အပျက်က ခုပြန်စဉ်းစားကြည့်ရင် ရယ်ချင်စရာ တော်တော်ကောင်းခဲ့တာ။ မင်းစဉ်းစားကြည့်လေ။ ငါ မသွားဖြစ်တဲ့ ကုမ္ပဏီည...
~~~~ မနက်ခင်းတိုင်းမှာ တွေ့ချင်နေတုန်းပဲ ~~~~ ~~~~ ညတိုင်း မင်းနဲ့ ဖုန်းတွေ အတူပြောမယ် ~~~~ ...
ကျူးပစ်ရဲ့ မြားချက်မှာ ငါတို့မျက်ဝန်းတွေ မိုးလင်းခဲ့တယ်
အလွမ်းတွေကို ရင်ငွေ့ပေးဖို့ အဲဒီနေ့က မင်းနဲ့ငါ အကြည့်ချင်း ဆုံခဲ့ကြတယ်……… ကျူးပစ်ရဲ့ မြားချက်မှာ ငါတို့မျက်ဝန်းစကားတွေ မိုးလင်းတုန်း အချ...
အား​ကောင်း​မောင်းသန်လူငယ်​တွေ ဦး​ဆောင်ပြီး CBM ဥက္ကဌကိုယ်စားလို့ သူ့ကိုယ်သူ သတ်မှတ်သူကြီး ဦးဝင်း​သော်နဲ့ ဗဟိုဘဏ်က စာတတ်​ပေတတ်လူနည်းနည်းပါ...